Samsung Galaxy Z Flip3 iyo Galaxy Z Fold3 ayaa lagu dhawaaqay: Ogow Tilmaamyadooda, Qiimahooda iyo Bilowga Rasmiga ah | Androidsis
Samsung Galaxy Z Flip3 iyo Galaxy Z Fold3 ayaa lagu dhawaaqay: Ogow Tilmaamyadooda, Qiimahooda iyo Bilowga Rasmiga ah
daniplay | | Mobiles, Samsung
Samsung ayaa ku soo bandhigtay labadeeda calan ee Unpacked bishii Ogosto 11keedii. Shirkadda Kuuriya ayaa ku dhawaaqday Samsung Galaxy Z Flip3 cusub iyo Samsung Galaxy Z Fold3, taleefannada casriga ah ee loogu talagalay jeebabka oo samayn kara kharash badan, maadaama ay leeyihiin kharash aad u sarreeya.
Midka ugu horreeya, Galaxy Z Flip3 wuxuu saaraa shaashad weyn oo weynMarka laga reebo tan, waxaa loogu talagalay inay iska caabiso biyaha, iyo faahfaahinta kale. Galaxy Fold3 ayaa ku xiraya kamarad shaashadda hoosteeda, halka ay timaaddo iyada oo si fiican u qalabeysan oo leh astaamo gudaha ah oo ka dhigaya taleefan casri ah oo leh karbaashyo.
1 Galaxy Z Fold3, oo ah taleefan casri ah oo heerkiisu sarreeyo
2 Processor, RAM iyo keyd
3 Tayada sawirku waxay u mahadcelineysaa dareemayaasha
4 Batariga, isku xirnaanta iyo waxyaabo kale oo badan
5 S Qalinka isdhexgalka
5.1 Macluumaadka farsamada
6 Samsung Galaxy Z Flip3, terminal weyn oo leh iska caabin biyo
7 Qalabka gudaha ee Galaxy Z Flip3
8 Guud ahaan saddex kamaradood
8.1 Macluumaadka farsamada
9 MUUQAALKA LABAAD
10 Helitaanka iyo qiimaha
Galaxy Z Fold3, oo ah taleefan casri ah oo heerkiisu sarreeyo
Kharashka ku dhawaad ​​1.800 euro had iyo jeer macnaheedu maahan inaad haysato taleefanka ugu fiican suuqa. The Samsung Galaxy Z Fold3 wuxuu ballan qaadayaa inuu ku wada yeelan doono shaashad laba -laab ah. Cabbirka guddigu wuxuu ka dhigayaa ku dhawaad ​​kiniin 8-inji ah, laakiin had iyo jeer wuxuu ku shaqeyn doonaa mid haddii aad rabto.
Guddiga ugu weyn waa 2-inji Dynamic AMOLED 7,6X Infinity Flex Display QXGA + Iyada oo leh xallinta 2208 x 1768 pixels, heerka cusboonaysiinta waa 120 Hz. Kan sare loo dhejiyay waa 2-inji Dynamic AMOLED 6,2X oo leh xallinta 2268 x 832 pixels, isla sharadkaas.
Sida haddii aysan taasi ku filnayn, taleefanku wuxuu muujinayaa naqshad weyn oo la mid ah tii ugu dambeysay ee Galaxy S20, laakiin qayb ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee ay shirkaddu bilowday, S21. S-Pen wuxuu yeelan doonaa sumcad buuxda isagoo taageero yeelanaya, oo lama huraan ah marka ay timaaddo in la helo shaashadda laba -laabka ah iyo in la hagaajiyo marka la higsanayo.
El Samsung Galaxy Z Fold3 waxay go'aansataa inay koriso mid ka mid ah chips -yada ugu awoodda badan, Snapdragon 888 oo ka socda Qualcomm, oo kuu keenaya isku xirnaanta 5G. Waxay ku tiirsan tahay chip Adreno 650, oo loogu talagalay inay ku fuliso cinwaanno heer kasta ah, sidaa darteed waxay ballanqaadaysaa qalliin sahlan haddii aad rabto inaad adeegsato codsiyada ama ciyaaraha fiidiyowga ee ka socda Dukaanka Play.
Buuxi wadar ahaan 12 GB oo RAM ah, oo ku filan in la wada shaqeeyo dhowr codsi isla mar, xilligan waxaa jira hal ikhtiyaar oo keliya sida caadiga ah. Markay timaado kaydinta, waxaa jira ilaa laba ikhtiyaar oo la dooran karo, 256 iyo 512 GB, oo iska tuuraya 128 GB maadaama ay tahay meel aad u yar.
Tayada sawirku waxay u mahadcelineysaa dareemayaasha
Jiilka saddexaad ee Fold wuxuu qaataa boodbood weyn, oo leh 12 megapixel Dual Pixel sensor, ku habboon qabashada sawirradaas si cad. Ta labaad waa 12 megapixel xagal ballaadhan oo ballaadhan halka kan saddexaadna uu yahay muraayad telephoto ah oo isla tirada megapixels ah, 12, oo ay ku jiraan Dual OIS iyo 2x zoom.
Waxay isku daraysaa 10 megapixel f / 2.2 kamaradda hore, 80º FOV iyo 1,22 µm photodiodes, oo ku habboon qabashada sawirro iyo fiidiyowyo tayo sare leh oo leh xallinta HD + oo buuxa. Kaamirada gudaha waa tii shanaad, waa 4 megapixels f / 1.8, FOV 80º iyo 2 µm photodiodes, waxaa laga yaabaa inay leedahay xoogaa isticmaalka dheeraadka ah marka loo baahdo.
Batariga, isku xirnaanta iyo waxyaabo kale oo badan
Qodobka cajiibka ah ee Samsung Galaxy Z Fold3 waa kan madaxbannaanida, aaladda waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu dhejinayo batari 4.400 mAh. Xawaaraha lacag -qaadista lama xaqiijin, waa qodob ay tahay in la caddeeyo, gaar ahaan haddii ay tahay lacag degdeg ah, haddii ay dhaafto 25W waxay ku filan tahay in lagu soo dallaco 45 daqiiqo oo buuxa.
Waa mid ka mid ah boosteejooyinka ugu dhammaystiran marka ay timaaddo isku xirnaanta, isku-darka 5G / 4G, Wi-Fi-xawaaraha sare leh, Bluetooth 5.2, NFC, GPS iyo furitaanku waxay ku jiraan faraha dhinac. Saxaaraddu waa saddex -laab si loo geliyo eSIM iyo laba Nano SIM, aqoonsi wejiga iyo iska -caabbinta IPX8.
S Qalinka isdhexgalka
Multitasking wali wuxuu ku jiraa Galaxy Z Fold3, tan waxay u adeegsan doontaa S Pen isbahaysi weyn marka aad wax qoreyso, sawirto iyo marka aad isticmaaleyso tilmaamaha. Marka laga reebo S Pen -ka caadiga ah, S Pen Pro oo leh Bluetooth ama S Pen Fold Edition waa la isticmaali karaa (tani waxay timaaddaa iyada oo aan lagu darin Bluetooth).
Labadaba S Pen Pro iyo S Pen Fold Edition labaduba waxay leeyihiin taageero dhaqdhaqaaqyada Hawada oo laga arki karo S Pen ee Samsung Galaxy Note 10. Tallaabo kale hore u qaado Samsung Galaxy Z Fold3, labaduba waa kuwo sax ah oo ku habboon marka lagu isticmaalayo shaashad labalaab ah oo ku dhawaad ​​8 inji ah.
MUUQAAL WAYN 2 -inji Dynamic AMOLED 7.6X Infinity Flex Display QXGA + oo leh 2208 x 1768 pixel resolution - Heerka cusbooneysiinta: 120 Hz - 374 dpi - taageerada S -Pen
MUUQAALKA LABAAD Dynamic AMOLED 2X ee 6 2 inji oo leh xallinta 2268 x 832 pixels - Heerka cusboonaysiinta: 120 Hz - 387 dpi
PRORESOR Snapdragon 888 5G
KAADHKA CARRUURTA Adreno 650
Kaydinta Gudaha 256 / 512 GB UFS 3.1
KAAMARKA DAR 12 megapixel f / 1.8 Dual Pixel AF - 12 megapixel xagal ballaadhan - 12 megapixel lens telephoto - 4 megapixel camera gudaha
KAAMI HOR 10 megapixel f / 2.2 kamarad hore
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 11
BATARY 4.400 Mah
Isku xirnaanta 5G NSA / SA - Sub6 - mmWave - Wi -Fi - Bluetooth - NFC - GPS
DHIBAATOOYINKA 2 Nano SIM - 1 eSIM - ku hadla stereo - Dolby Atmos - Side faraha faraha - Aqoonsiga wejiga -
Qiyaasaha iyo Miisaanka Gram 271
Samsung Galaxy Z Flip3, terminal weyn oo leh iska caabin biyo
Waxaa loo bilaabay sidii la yaabka shirkadda, maadaama aysan wax shaqo ah ku lahayn Flip2, ugu yaraan waqtiga wixii la arkay markii hore. Samsung Galaxy Z Flip3 wuxuu isku daraa guddi weyn, laakiin taasi maahan waxa kaliya ee muuqda, maadaama ay muujineyso iska -caabbinta biyaha oo ah IPX8.
Shaashadda ugu weyni waa 2-inji Full HD + Dynamic AMOLED 6.7X Infinity Flex Display oo leh xallinta 2.640 x 1.080 pixels iyo heerka cabbirka 120 Hz. Midka labaad waa 1,9-inji Super AMOLED panel oo leh qaraar ah 260 x 512 pixels, oo leh 302 dpi.
Qalabka gudaha ee Galaxy Z Flip3
Sida Samsung Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 ayaa rakibaya Qualcomm Snapdragon 888, isaga oo siinaya awood weyn oo ka dhan ah hawl kasta. Qaybta garaafku waxay wax walba si fudud ugu dhaqaajin doontaa, marka laga reebo taasi waxay muujin doontaa xawaare aad u sarreeya oo leh isku xirka 5G ee hawlwadeennada kala duwan.
Ka hadlida RAM, qaabkani wuxuu kor u qaadaa modul xusuusta 8 GB ah, Waa ikhtiyaarka kaliya ee la heli karo xilligan oo aan meesha laga saarin inay ku kordhiso nooc cusub. Kaydinta, Flip3 wuxuu siin doonaa laba ikhtiyaar oo laga doorto, 128 iyo 256 GB oo leh xawaare UFS 3.1 ah.
Guud ahaan saddex kamaradood
Farqiga u dhexeeya Fold3 iyo Flip3 waa wax badan, Dhexdeeda waxaad ku arki kartaa tusaale ahaan marka kor loo qaadayo muraayadaha si sawirro loo qaado, iyada oo wadar ahaan saddex ah nooca Galaxy Z Flip3. Waxay leedahay laba gadaal, oo leh 12-megapixel Dual Pixel AF oo leh xasilinta indhaha iyo xagal 12-megapixel labaad oo aad u ballaaran.
Dhinaca hore waxaad ka arki kartaa 10 megapixel f / 2.4 sensor, 1,22 µm photodiodes iyo 80º FOV, oo ku habboon in sawirro wanaagsan iyo fiidiyowyo laga qaado kaliya marka la soo jeesto. Qodobka taban ayaa ah inuu ku faafo xitaa muraayad gadaal ah sida muraayadda telephoto, gaar ahaan marka aad aragto qiimaha sare ee aad bixiso.
MUUQAAL 2-inch Full HD + Dynamic AMOLED 6.7X Infinity Flex Display (2.640 x 1.080 pixels) 425 dpi iyo 120 Hz
Super AMOLED 1 9 inji (260 x 512 pixels) - 302 dpi
PRORESOR Snapdragon 888
KAAMARKA DAR 12 megapixel Dual Pixel AF - 12 megapixel xagal aad u ballaaran
KAAMI HOR 10 megapixels f / 2.4
BATARY 3.300 Mah
Isku xirnaanta 5G SA / NSA - Sub6 - mmWave - Wi -Fi - Bluetooth - NFC - GPS - stereo sound -
DHIBAATOOYINKA Akhristaha faraha - Accelerometer Barometer - Gyroscope - IPX8 - Gomagnetic sensor - Dareenka u dhawaanshaha - Dareeraha iftiinka
Qiyaasaha iyo Miisaanka Gram 183
El Samsung Galaxy Z Flip3 wuxuu bilaabi doonaa iibinta 1.049 euro laga bilaabo Ogosto 27, oo kaa maqan wax ka badan laba toddobaad iibsigaaga. Waxaa lagu heli doonaa kareem, cagaar, lavender, madow madow, cawl, caddaan iyo casaan. Waa taleefan casri ah oo qiimahiisa hoos u dhiga.
Samsung Galaxy Z Fold3 wuxuu ku bilaaban doonaa qiime dhan 1.799 euro, kharash noqon doona maalgelin aad u weyn maadaama uu yahay aalad loogu talagalay in lagu dhaliyo waxqabad aad u weyn. Waxay ku imaanaysaa Ogosto 27 codadka midabka soo socda: Phantom Black, Phantom Green iyo Phantom Silver.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung Galaxy Z Flip3 iyo Galaxy Z Fold3 ayaa lagu dhawaaqay: Ogow Tilmaamyadooda, Qiimahooda iyo Bilowga Rasmiga ah
Top 9 Beddelka in VideoScribe